Tacliinta Sare iyo Kacaankii Labada Jibaaran | Martech Zone
Tacliinta Sare iyo Kacaankii Laba-geesoodka ahaa
Isniin, Oktoobar 11, 2010 Sabti, Sebtember 26, 2015 Adam Yar
Jaamacadaha ayaa dabada ka laadaya warbaahinta bulshada! Waxay ku jiraan Twitter, Facebook waxayna bilaabeen inay adeegsadaan codsiyada juquraafi ahaan sida Foursquare. Maxay tani u shaqeynaysaa? Inta badan ardayda mustaqbalka waxay go'aan ka gaaraan halka ay ku dhigan doonaan iskuulka socdaalkooda xerada. Marka sameynta aragti wanaagsan inta lagu guda jiro safarka koowaad waa muhiim. Foursquare wuxuu u oggolaanayaa jaamacadaha inay sahmiyaan dhismaha qaab cusub. Codsiga waxaa loo isticmaali karaa in looga tago talooyin si loo hubiyo in rajooyinka ay ogaadaan halka loo socdo iyo waxa la sameeyo inta lagu jiro booqashada. Sababaha kale ee jaamacaduhu u adeegsadaan codsiyada juquraafiga ayaa ah:
La wadaag xaqiiqooyin yar oo la yaqaan
La wadaag macluumaadka ku saabsan astaamaha, dhismayaasha, iyo cinwaanada
Ka jawaab su'aalaha ka hor inta aan la waydiinin
Sii abaalmarino iyo calaamado si aad ugu dhiirrigeliso ardayda cusub inay sahamiyaan xerada
La wadaag dhaqanka dugsiga
U oggolow ardayda inay dhex galaan bulshada ka baxsan xerada
Ka hel talo bixin ardayda hore
Isticmaal kale oo loogu talagalay Foursquare oo ka mid ah goobaha jaamacadda ayaa loogu talagalay ardayda ka qalin jabisay "dib u booqashada xerada". Foursquare ayaa ka caawin kara iyaga inay ogaadaan waxa dhacaya tan iyo markii ay qalin jabiyeen. Tusaale ahaan, alum ayaa hubin doona oo arki doona dhisme cusub. Muuqaalka kala duwani wuxuu muhiim u noqon karaa dadka qaar dib u booqashada Jaamacadda…. waqtiga ayaa sheegi doona midkaas. Ku darista astaamahaas waa codsi u sheegi doona ujeedada cusub ee dhismaha iyo taariikhda "cusub". Waxay ka caawisaa alumku inuu isku xirnaado oo uusan dareemin inuu lumay.
Harvard waa hal iskuul oo isticmaala Foursquare. Waxay bixiyaan macluumaad taariikhi ah iyo waxyaabo xiiso leh oo lagu sameeyo xerada, kuwaas oo dhammaantood laga heli karo Foursquare hoostooda Harvard bogga. Jaamacadda Harvard waxay ku leedahay dhowr bog Foursquare dhismaheeda badan.
Jaamacadaha waxaa lagu yaqaan inay leeyihiin dhacdooyin badan. Codsi ka duwan kan ka caawinaya la wadaagga dhammaan dhacdooyinkan ayaa ah WhrrlCodsigan ayaa u oggolaanaya dadka isticmaala inay iska xaadiriyaan sidoo kale soo geliyaan sawirro iyo farriimo ay wadaagaan dhacdada. Barnaamijkan wuxuu awood u leeyahay inuu isku keeno ardayda cusub iyo qalinleydii. Waxay kuxiran yihiin khibradahooda la wadaago waxayna ku arki karaan waqtiga dhabta ah waxa ka socda munaasabadaha ka dhaca xerada. Sida laga soo xigtay Mashable, Bishii Meey 2010, Jaamacadda St. Edwards waxay isticmaashay Whrrl si loo xuso xafladii qalin jabinta.
Dhiirigelinta kale ee jaamacadaha si ay u bilaabaan adeegsiga barnaamijyada juquraafiyeed waa xaddiga xogta la ururin karo. Xogtu waxay tusi kartaa dhacdooyinka inta badan la xaadirayo, tirakoobka dadka, dhaqanka kulleejyada waxayna sameyn karaan go'aano xog-ogaal ah oo ku saleysan waxa ardayda uga jawaabayaan. Hay'adaha tacliinta sare ee qaata codsiyada geoloaction ayaa kahor mari doona ciyaarta waxayna awoodi doonaan inay kula xiriiraan ardaydooda siyaabo qiimo leh.
Tags: dhacdooyinka kulleejadadhacdooyinkaafar geesoodgeolocationjaamacadahadhacdooyinka jaamacadda
Dhibcaha iyo U Qalmida Hogaanka Warbaahinta Bulshada
Korsasho, Dareen, Ballaarin
Jan 6, 2011 saacadu markay ahayd 10:05 PM
Kyle, waad ku mahadsan tahay qoraalkan weyn. Waxaan ahay khabiirka isgaarsiinta ee kulleej yar oo fanka deeqsi ah oo ku yaal Moorhead, Minnesota (http://foursquare.com/concordia_mn). Ma lihin arday badan oo isticmaalaya laakiin waxaan fiirineynaa siyaabo aan ku ballaarin karno saldhiggeena isticmaale waxaan rajeyneynaa inaan kor u qaadno shaqaalaysiintayada.
Ma isweydiineysaa haddii aad u maleyneyso inay ka muhiimsan tahay inaad leedahay khaas ah ama talooyin ku saabsan xerada? Waxaan ka shaqeyneynay inaan ku darno talooyin laakiin waxaan la halgameynaa siyaabo aan ugu biirin karno dhiirigelinta qaybta afar-geesoodka ah. Ma haysaa wax talo bixin ah?
Apr 30, 2012 at 11: 04 AM
Waad ku mahadsan tahay Kyle baadhitaanka fursadaha isticmaalka warbaahinta bulshada ee Jaamacadaha. Tacliinta Sare waxay ku jirtaa gacanta saddaxaad ee Kacaan. Way dhaafsiisan tahay kana sarreysaa Teknolojiyada Macluumaadka laakiin waxay ku saleysan tahay Aqoonta, Aqoonta, Teknolojiyada farsameynta aqoonta iyo Warshadaha Aqoonta.
'Aqoonyahan - Kacaan Cusub oo Tacliinta Sare ah' Joornaalka Madasha Jaamacadaha Adduunka 4,1,2011: 1-11 ayaa si qoto dheer uga hadlaya qaar ka mid ah arrimahan marka laga reebo aragtiyaha Mathew ee Isticmaalka Aqoonta-Soo-saarista, Aqoonta iyo Warshadaha Aqoonta. Arimaha la xiriira ayaa wax laga qabtaa http://www.slideshare.net/drrajumathew